हुवावेका फोन किन्न नगद सहयोग, आइफोन किन्न निषेध! :: PahiloPost
हुवावेका फोन किन्न नगद सहयोग, आइफोन किन्न निषेध!
30th December 2018, 01:57 pm | १५ पुष २०७५
सांघाइ : चीनका कम्पनीहरुले आफ्ना कामदारलाई हुवावेका स्मार्टफोन किन्न प्रोत्साहित गरिरहेका छन्।
कैयन् कम्पनीहरुले हुवावेको फोन किन्नकै लागि कामदारलाई नगद सहयोग समेत दिइरहेको छ। यस्तैमा केही कम्पनीहरुले भने आइफोन किनेमा जरिवाना गर्ने चेतावनी समेत दिइरहेका छन्।
अमेरिकाको अनुरोधमा क्यानडा भ्रमणमा रहेकी हुवावेकी उच्च अधिकारी पक्राउ परेपछि चीनका कम्पनीहरुले हुवावेको समर्थनमा यस्तो अभियान थालेका हुन्।
पूर्वी चीनको फुचुङ टेक्नोनोजीका अनुसार त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हुवावेको फोन किन्दा १ सय देखि ५ सय युआनसम्म सब्सिडी दिइएको थियो। २ सय कामदारमध्ये ६० जनाले हुवावेको मोबाइल किनिसकेको पनि कम्पनीले जनाएको छ।
यसैगरी चेंग्दु आरवाईडी इन्फरमेसन टेक्नोलोजीले हुवावेको मोबाइल खरिदमा १५ प्रतिशत नगद सहयोग दिने जनाएको छ। 'हामी चीनमा बनेका राम्रा उत्पादनको समर्थन गर्छौं'-कम्पनीका प्रवक्ताले भने ' कर्मचारीलाई नगद सहयोग कम्पनीले आफ्नो तर्फबाट गरेको हो। यसमा सरकारको कुनै निर्देशन छैन।'
सान्जेनको म्यानप्याड कम्पनीले भने आइफोन किन्दा जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको छ।
हुवावेकी प्रमुख वित्तीय अधिकारी मेङ्ग वानझाउको पक्राउपछि चीनमा हुवावे कम्पनीको समर्थनमा यस्तो पहल सुरु भएको हो।
हुवावेका फोन किन्न नगद सहयोग, आइफोन किन्न निषेध! को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।